House for Sale in Kamaryut - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Houses for Sale in Kamaryut
ဝင်ဒါမီယာ သံလွင်လမ်းတွင် မိသားစုများနေထိုင်ရန်ကောင်းသော လုံးချင်း ၃ထပ်ရောင်းမည်။
ဝင်ဒါမီယာ သံလွင်လမ်း လုံးချင်း ၃ထပ် (30x75) 4MBR,7AC,ပါကေ...
Ad Number S-9182729
♦ ကမာရွတ်မြို့နယ် သံလွင်လမ်း ရှယ်လုံးချင်း ကောင်...
Ad Number S-9146430
Lay Takhon RealEstate Co.,Ltd Close
ကမာရွတ်မြို့နယ်,ဘိုလှ gardenရှိလုံးချင်း ၃ထပ်တိုက်ရောင်းမည်
17,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-9193816
16,500 Lakh (Kyats)
Ad Number S-9193799
150,000 Lakh (Kyats)
09795959521/ 09251032914/ 0973163002
Ad Number S-9190814
စီးပွားရေးလုပ်ရန်လည်းကောင်း လူနေထိုင်ရန်လည်းကောင်းသော ကမာရွတ်လှည်းတန်းရှိ...
5,700 Lakh (Kyats)
Ad Number S-9185113
၀င္ဒါမီယာတြင္ လမ္းေကာင္း လုံးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္
Ad Number S-9184201
သံလြင္လမ္းတြင္ သုံးထပ္တိုက္အသစ္ လုံးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္
Ad Number S-9184080
ကမာရြတ္ ၀င္ဒါမီယာတြင္ သုံးထပ္လုံးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္
Ad Number S-9184012
ကမာရွတ် လှည်းတန်းစိန်ဂေဟာအနီး လုံးချင်းအိမ်နေရာကောင်းရောင်းမည်။
Ad Number S-9182594
pearcondo near Kabaraye Pagoda road/20*60/4RC/ Sane Lae Kan thar street/4500lakhs
Ad Number S-9178786